I-Wristband ye-RFID, iimveliso ze-NFC, iKhadi lePVC, ikhadi leNsimbi - i-Chuangxinji Factory.
13.56mhz ISO14443A Ulawulo loFikelelo ABS RFID NFC ...
Customized yoshicilelo Amakhadi isipho sokunyaniseka PVC Plastic
Ikhadi lePVC elilungiselelwe iPVC leNFC-MIFARE Ultralig...
IMicrochip encinci encinci kwintsimbi yeNFC Isincamathelisi seFPC NF...
Emsebenzini Ukhuseleko lwe-rfid patrol anti-metal nfc tag
Isincamathelisi se-RFID engenanto kwiNFC yentsimbi yeTag
Isincamathelisi sePVC esiqinileyo sePET RFID kwintsimbi ntag2...
Ukhuseleko lweNtag213 rfid patrol anti-metal ngqekembe ukuya...
Small micro fpc ntag213 kwi metal mini dia10mm n...
Yasekwa ngo-2001 ngonyaka, i-Shenzhen Chuangxinji smart card co., Ltd yayikhethekileyo ekuveliseni
kunye nokuthengiswa kwekhadi le-PVC, ikhadi le-RFID, isongo se-NFC kunye ne-RFID Tag njl.
Iphethe iintambo ezintathu zale mihla kunye nomgangatho ophezulu wemveliso:
Umgca wemveliso yekhadi lePVC kunye nemveliso yenyanga ye-20,000,000 amakhadi amaqhekeza: Oomatshini abatsha be-CTP kunye ne-brand Heidelberg koomatshini bokushicilela be-offset, oomatshini aba-8 bokudibanisa.
Umgca wemveliso ye-antenna kunye nemveliso yenyanga yamakhadi angama-20,000,000 amaqhekeza: ukuqengqeleka koomatshini bokushicilela, oomatshini bokudibanisa, oomatshini bokhukuliseko kunye nokukrola.
Umgca wemveliso we-RFID wesiphelo kunye nemveliso yenyanga ye-500,000,000 yamakhadi ahlakaniphile kunye ne-300,000,000 ye-RFID tags: ukubuyisela umva oomatshini bokudibanisa oomatshini bokusika abafayo, oomatshini bokulahla.
Sinabasebenzi aba-6 bezentengiso abathetha isiNgesi, iJamani, iFransi, iSpanish, isiArabhu njalo njalo, ishishini lethu lisuka eYurophu, eMelika, eOceania, eAfrika, eAsia nakumazwe asempuma-mpuma kunye nemimandla.
Isisombululo se-RFID sesilwanyana sendlebe
Metro RFID Card Impumelelo Case
Qatar Airlines iplastiki pvc Luggage Tag
Iithegi ezihlambekayo zeRFID
Ezi ziindaba zamva nje zenkampani yethu. Siza kuhlaziya ezinye iindaba zenkampani, amanqaku oshishino, kunye namanqaku aphambili kule modyuli amaxesha ngamaxesha ... Siyavuya ukwabelana nawe ngezi ndidi, siyathemba ukuba uyayithanda.
Zeziphi izinto eziluncedo kwinkqubo yolawulo lwe-warehouse ye-RFID?
Nangona kunjalo, imeko ekhoyo ngoku yeendleko eziphezulu kunye nokusebenza okuphantsi kwikhonkco le-warehouse, ngophando ...
Njengoko sonke sisazi, ukusetyenziswa kwe-RFID kwishishini lempahla sele kuxhaphake kakhulu, kwaye kunokuzisa kakhulu ...
RFID ulwazi olusisiseko
1. Yintoni i-RFID? I-RFID sisishunqulelo se-Radio Frequency Identification, oko kukuthi, ukuchongwa kwamaza kanomathotholo....
Umahluko kunye noqhagamshelwano phakathi kwe-RFID esebenzayo kunye ne-passive
1. Inkcazo esebenzayo rfid, eyaziwa ngokuba yi-rfid esebenzayo, amandla ayo okusebenza anikezelwa ngokupheleleyo yi-batt yangaphakathi...